Ireo fanambarana tamin'ny taona 2008 | SEFAFI
Ireo fanambarana tamin'ny taona 2008
Sasin-teny 2008 31/12/2008
Iza no tompon'ny fanjakana ?
Tsy misy olona misalasala ny amin'ny hoe : hitovy tsy misy valaka amin'ny maro teo aloha ny taona 2008. Asehon'ny fanambarana samihafa nataon'ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena (SeFaFi) izany : tsy vitan'ny hoe tsy misy firosoana marina sy maharitra azon'ny firenena ieboeboana raha ny amin'ny fitondrana tsara tantana sy fampandrosoana no resahina, fa ny marina kokoa dia fahavoazana sy fihemorana maro no nianja...
Ny asabotsy 13 desambra 2008 tokony ho tamin’ny 8 ora alina, ny antokona fahitalavitra VIVA dia nandefa nandritra ny 45 minitra raki-peo sy sarin’i Didier Ratsiraka, filohan’ny Repoblika teo aloha ; tokony ho tamin’ny 11 ora alina, tonga tao amin’ny toeran’ny fahitalavitra ny olon’ny mpitandro ny filaminana mba hanao ny fanakatonana azy. Teny amin’izy ireo ny fanapahan-kevitry ny Minisitry ny fifandraisan-davitra, ny Paositra ary ny fifandraisana, Filohan’ny Vaomi...
Ahoana no itantanana ny tanintsika ?
Ny azo iantsoana ny " raharaha Daewoo " dia niafara tamin’ny fihemorana ankapobe teo amin’ireo antokon’olona roa voakasika. Tsiahivintsika ny zava-nisy. Ny 18 novambra, ny Financial Times, gazety fijery eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana iraisam-pirenena, dia nampiseho fa i Madagasikara dia nirotsaka hampanofa 1,3 tapitrisa hekitara amin’ny tany azo volena (izany hoe ny antsasaky ny velaran-tany azo volen’ny firenena). Roa andro taty aoriana, ny 20 novambra, io ga...
Entina hametrahana politika vaovao ho an'ny harena an-kibon'ny tany eto Madagasikara
Nahitana ny fanombohan’ny tetikasa roa lehibe misahana ny harena an-kibon’ny tany ity taona 2008 ity : fasimainty ao Taolanâro sy nikelina ary kaobalta ao Ambatovy. Niteraka fanontaniana maro ireo mba tsy hilazana hoe fanakianana mivaivay avy amina fikambanana tsy miankina (ONG) malagasy sy iraisam-pirenena ary koa ny fanontaniana nataon’ny haino aman-jery sy gazety eto an-toerana sy any ivelany. Ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ao Afrika sy any Amerika...
Ny demokrasia sy ny fisainana repoblikana
Mankalaza ny demokrasia… Tamin’ny 2007, ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana dia nanambara fa ny 15 septambra dia « Andro iraisam-pirenena momba ny demokrasia ». Madagasikara dia nankalaza voalohany izany andro izany, ary izany dia tamin’ny alalan’ny hetsika roa izay nanasana ny SeFaFi : ny iray tao amin’ny Lapan’ny Antenimieran-doholona, nokarakarain’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona momba ny lohahevitra hoe : « Ny Parleman...
Ny fiakaran'ny vidim-piainana
Mampiedinedina ny mpitondra fanjakana ny fanambaràna ny tahan’ny fisondrotry ny toekarena, ny vahoaka indray dia ny fvoaran’ny vidim-piainana no mahaseriny azy. Nanomboka ny taona 1997 ka hatramin’izao, avahana ny taona 2002, Madagasikara dia nahitana fa ambony hatrany ny tahan’ny fisondrotry ny toekarena miohatra amin’ny tahan’ny fitombon’ny mponina. Maneho izany fa nitombo haingana kokoa noho ny isan’ny vava fahanana ny harem-pirenena, saingy tsy nampihena ny...
Harena ankibon'ny tany ho an'ny tombotsoan'iza ?
Ny fampiasana tsara ny harena voajanahary dia lohahevitra iray resahina ankehitriny, indrindra aty Afrika. Tamin’ny taona maro farany izay, ny fandrosoana haingana an’i Azia dia niteraka filàna akora fototra amboniny ary nampidangana ny vidiny izany. I Afrika izay kaontinanta midadasika sy tsy dia be indostria kanefa manana harena voajanahary betsaka dia mampitsiriritra ireo firenena hafa. Tsara ihany anefa ny mampahatsiahy eto fa ireo harena ireo dia an’ny fir...
Fitsinjaram-pahefana toa inona ho an'i Madagasikara ?
1. Faritra sy kaominina
Mbola tsy voavaha ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara, izany moa dia tahaka izay hita any amin’ny firenena maro, indrindra ireo nandova ny fomba amam-panao antsoina hoe " jacobine" sy mampivangongo fahefana any an-tampony tahaka ny ao Frantsa. Ndeha ho tsiahivina aloha ny famaritana ny voambolana " itsinjaram-pahefana ". Ny Larousse 2008 dia mamaritra azy ho " Teti-pandaminana ny rafitry ny fitantanan-draharahan’ny...
Fifidianana mikasika ny faritra, tanterahina ao anatin'ny manjavozavo sy ny fisalasalana
Hotanterahina amin’ny 16 martsa ho avy izao ny fifidianana mikasika ny faritra. Heverina ho dingana farany amin’ny fametrahana ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, araka ny voafaritra ao amin’ny Lalàmpanorenana nasiam-panovana tamin’ny 04 Aprily 2007, izany latsabato izany. Tsy azo lavina anefa fa mety tsy hiraika firy amin’izany ny ankapoben’ny olona. Manamarina ny fanambarana farany navoakanay ny isan’ny kandidà na lisitra tokana. Mifanohitra amin’ny hev...
Hatraiza no ahazoa-mitoky ny fifidianana sy ny olom-boafidy eto amintsika ?
Voamarin’ny fifidianana tamin’ny taona 2007 ny fiahiahiana izay naverimberin’ny SeFaFi matetika1. Mety mahasoa ny iresahana indray ny lesoka tena nisongadina, sy ny fehin-teny azo tsoahana avy amin’izany. Tsy fahampian’ny fisoloan-tena Misolo tena ny mponina na ny ampahan’ny mponina, izay ny maro an’isa no nifidy azy, ny olom-boafidy iray. Izany fisafidianan’ny maro an’isa azy izany no ananany ny rariny ka ahafahany manao zavatra amin’ny anaran’n...